Yangu iPhone Haizoshandure Yakapfuura Iyo Apple Logo! Heino Kugadzirisa. - Iphone
maitiro ekurodha pasi ese episode epodcast
ndinga viga sei nhamba yangu yefoni kana ndichifona
iphone 5 skrini haibatike
Paunenge uchitora iPhone yako, unoona kuti iri kushandisa nguva isingawanzo yakareba kutenderera. Yako iPhone skrini inongoratidza iyo Apple logo uye hapana chimwe uye iwe hauzive zvekuita. Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura zvaunofanira kuita kana yako iPhone isinga batidze zvakapfuura iyo Apple logo .
Nei iPhone Yangu Isinga Tendeuke Yakapfuura Iyo Apple Logo?
Paunobatidza yako iPhone, inotangisa iyo software uye inotarisa zvese zvigadzirwa kuti ive nechokwadi chekuti iri kushanda nemazvo. Iyo Apple logo inoratidzwa pane yako iPhone apo izvi zvese zviri kuitika. Kana chimwe chinhu chikatadza kufamba munzira, yako iPhone haizoshanduri pamusoro yapfuura iyo Apple logo.
Nehurombo, ichi kazhinji chiratidzo chedambudziko rakakomba. Zvisinei, kuchine mukana unogona kugadziriswa.
Kana iwe uchangobva kutsiva chikamu pane yako iPhone uye wave nedambudziko iri, inogona kunge iri zano rakanaka kuyedza kuitazve icho chikamu. Kana usati wakatsiva chikamu che iPhone yako, tevera matanho ari pazasi!
Dzimwe nguva kumanikidza yako iPhone kuti itangezve ndizvo zvese zvaunoda kuti uite kugadzirisa dambudziko. Sezvo yako iPhone isinga batidze zvakapfuura Apple logo, iwe uchafanirwa kuita yakaoma reset. Nzira yekumisikidza yakaoma iPhone inoenderana nekuti ndeipi modhi yaunayo, saka isu takatyora maitiro echinhu chimwe nechimwe.
iPhone 6s, iPhone SE, & Pamberi
Panguva imwe chete bata uye bata iyo Bhatani repamba uye iyo bhatani remagetsi (Kurara / Wake bhatani) kusvikira iyo skrini yaenda nhema uye iyo Apple logo inoonekwa zvakare.
iPhone 7 & iPhone 7 Uyezve
Dhinda uye ubatisise iyo vhoriyamu pasi bhatani uye iyo bhatani remagetsi panguva imwe. Ramba wakabata mabhatani ese ari maviri kusvikira iyo logo yeApple yaonekazve pachiratidziro.
Tanga nekutsikirira uye kuburitsa iyo Vhoriyamu kumusoro bhatani . Wobva wadzvanya uye wasunungura iyo Vhoriyamu Pasi bhatani . Pakupedzisira, bata pasi bhatani repadivi . Ramba wakabata bhatani repadivi kusvikira logo yeApple yaonekwa. Rangarira kudzvanya mabhatani evhoriyamu pakutanga, kana zvisina kudaro ungangoerekana watumira meseji kune vako SOS vanobatika!
TO Mudziyo Firmware Dzokorora (DFU) dzosa erases uye reloads yako iPhone's software uye firmware. Rudzi urwu rwekudzorera zvakare idanho rekupedzisira iwe raunotora kuti utonge zvachose chero mhando ye iPhone software dambudziko.
Pazasi, isu tatyora pasi iyo DFU kudzoreredza maitiro emhando dzakasiyana dzeiyo iPhone.
DFU Dzoserai Vakwegura iPhones
Kutanga, taura yako iPhone kune komputa ne iTunes uchishandisa yako yekuchaja tambo. Wobva wadzvanya wabata bhatani remagetsi uye bhatani reKumba panguva imwe chete. Mushure memasekondi angangoita masere, rega bhatani remagetsi uchiramba uchingobaya bhatani reKumba. Bvisa bhatani repamba kana yako iPhone ikaonekwa muTunes.
Tanga maitiro kubva pakutanga chaipo kana yako iPhone isina kuratidza mu iTunes.
Kutaura nezve Chinotyisa Hardware Dambudziko
Kana yako iPhone ichiri kusatendeuka yapfuura iyo Apple logo, nyaya yehardware iri kukonzera dambudziko. Iri dambudziko chairo rinowanzoitika mushure mekugadziriswa kwebasa rekugadzirisa.
Kana iwe ukaenda kune wechitatu-bato rekugadzirisa shopu, tinokurudzira kudzokerako kuti uone kana vachizogadzirisa dambudziko. Sezvo vanogona kunge vari ivo vakazvikonzera, pane mukana wekuti vagadzirise yako iPhone, mahara.
Kana iwe ukaedza kutsiva chero chinhu uri wega, iwe uchazoda kudzorera iyo iPhone kune yayo yekutanga mamiriro pamberi kuitora muApple Chitoro . Apple haizobate yako iPhone kana kukupa iwe wekunze-we-garandi kutsiva mutengo kana vakaona kuti wakatsiva zvikamu zve iPhone yako nezvisiri-Apple zvikamu.
Pulse ndeimwe nzira huru yekugadzirisa yaunogona kutendeukira kwairi. Puls ikambani inodikanwa yekugadzirisa iyo inotumira nyanzvi inokwanisa yakanangana nepamusuwo pako. Ivo vanogadzira iPhones pane-iyo-nzvimbo uye vanopa warandi yeupenyu pane yekugadzirisa.
Tenga Nhare Itsva
Panzvimbo pekubhadhara kugadzirisa kunodhura, ungangoda kufunga nezvekushandisa iyo mari kutenga iyo nyowani foni. Tarisa uone yekuenzanisa foni chishandiso pa UpPhone.com kuenzanisa nhare dzese kubva kune yega isina waya inotakura! Nguva yakawanda, vatakuri vanokupa madhiri makuru pane imwe foni kana ukafunga kushandura.
Apple Apple Zuva
Isu tinoziva kuti zvinonetsa kana yako iPhone isinga batidze kupfuura yapfuura Apple logo. Iye zvino unoziva chaizvo kugadzirisa dambudziko iri kana zvikamboitika zvakare. Ndatenda nekuverenga. uye tizivise kuti iwe wakagadzirisa sei yako iPhone mune zvakataurwa pazasi!